विवाहले रोक्दैन चलचित्र यात्रा ! - बलिउड - साप्ताहिक
बलिउडकी सुन्दर अभिनेत्री आलिया भट्टको नयाँ चलचित्र ब्रह्रास्त्र प्रदर्शनको तयारीमा छ । रणवीर कपूरसँगको अफेयर तथा फरक अभिनय गर्ने अभिनेत्रीका रूपमा उनी अहिले चर्चामा छिन् । यसबीच आलियाले सम्भवत: पहिलोपटक आफ्नो विवाहका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएकी छिन् ।
एक अन्तर्वार्तामा आलियासँग सोधिएको थियो, विवाहपछि तपाईंको चलचित्र यात्रा कस्तो होला ? कतै बलिउडबाट बिदा हुने सम्भावना त छैन ? तर आलियाले विवाहपछि आफ्नो बलिउड यात्रा नरोकिने कुरा बताएकी छिन् ।
उनले भनेकी छिन्– ‘व्यक्तिगत तथा प्रोफेसनल जीवनलाई आ–आफ्नो हिसावले अघि बढाउनेछु, यो विषयमा मलाई कुनै चिन्ता छैन ।’